MacBook isina keyboard yakapihwa patent neApple | Ndinobva mac
Zvese zvinodzoka. "Komputa" yekutanga yakapfuura maoko angu yaive Sinclair ZX81. Mumwe waanoshanda naye kubva kuchikoro akamutengera iye. Sezvo yaishaya pekuchengetedza, kana tichida "kutamba" chimwe chinhu, taifanira kutanga taipa mirairo yese yemutambo muBasic. Shamwari yangu yakandimanikidza, yakatorwa mumagazini emwedzi nemwedzi aiburitswa panguva iyoyo, ndikaataipa. Taitamba nemapikisheni makuru matema nemachena kwechinguva, uye zuva rinotevera, titangezve.
Iyi "vintage" vibe inoenderana nekuti yakati ZX81 yaive ne "keyless" keyboard. Yaive imwechete yakapfava epurasitiki membrane ine skrini-yakadhindwa makiyi, ayo iwe waifanira kudzvanya kuti ubate neakadhindwa wedunhu aimhanya pazasi. Kufanana neavo vanowedzera-flat Casio "kiredhiti kadhi" macalculator. Iye zvino Apple yakapa patent MacBook isina makiyi, senge iyo komputa yakaumbwa naClive Sinclair. Zvese zvinodzoka.
Apple yakapihwa imwe patent inoenderana neMacBook. Mavhiki mashoma apfuura ini ndakatumira imwe nhau pane imwe patent iyo yakatsanangura pfungwa yeMacBook ine haptic zones pane iyo kesi pachinzvimbo che trackpad. Pane ino chiitiko patent nyowani yakapihwa munaKurume 30, 2021 inoita kunge ichabvisa kwete chete trackpad, asiwo izere keyboard.
Iyi patent nyowani yakanzi "inogadziriswa yekumanikidza inonongedza yekuisa chimiro chemagetsi zvigadzirwa". Pfungwa ndeyekudzivirira dambudziko nema mechanical keyboards, seApple paakaedza nedambudziko re butterfly-mashandisirwo emabhodhi akambotambura dzimwe nguva zvisingagadzirisike kana guruva netsvina zvaunganidzwa pasi pemakiyi.
Iyo imwechete inogadziriswa inotsvedzerera nzvimbo
Mufananidzo unoratidza zvakajeka pfungwa yeiyo patent.
Mune ino patent, iyo yekuisa nzvimbo, iko palaptop's keyboard uye trackpad zvinowanzo kuve, iri imwechete-yekubata simbi pamusoro. Pasi peichi chinzvimbo pane matanda maviri akavakirwa madhiraivho ekupinda.
Iyo yekumanikidza-inoburitsa dura inogona kupa mushandisi mhinduro yekuisa uye maburi madiki anotenderera mune yesimbi pamusoro anogona kubvumira mabhatani kana mativi kuti aratidze kuburikidza nekugadzirisa akasiyana maseturu.
Zvinonakidza kuti, maererano nepamutemo, mushandisi anogona kumisikidza nzvimbo yekupinda iye. Saka pachinzvimbo chekwerty keyboard, iyo yese nzvimbo inogona kushandiswa seinhamba keypad, kana imwechete trackpad, semuenzaniso.
Tichaona kana rimwe zuva pfungwa iyi yatove nemvumo ichazove yechokwadi, kana kungoramba yakamisikidzwa seyakavanzika kupfuura mazana emazana ayo anosara mune mazano nemaphurojekiti chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » MacBook isina keyboard yakapihwa patent neApple